Albuterol ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်၎င်းကိုမည်သို့ရှောင်ရှားရမည် - မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း | ဇွန်လ 2022
ဆီးဂိမ်း ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီသတင်း ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ကုမ္ပဏီ, သတင်း ကုန်ပစ္စည်း ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် သတင်း၊
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း >> Albuterol ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှောင်ရှားရမည်
သငျသညျ albuterol သတ်မှတ်ထားလျှင်, သင်က၎င်း၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်။ မေးခွန်းများရှိပေလိမ့်မည်။ ဤဆေးမှမည်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမျှော်လင့်သင့်သနည်း။ နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်လုံခြုံပါသလား။ အခြားဆေးဝါးများသောက်နေရင်သင်စိုးရိမ်သင့်သလား။ သတိပေးချက်များနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ၊ အခြားဆေးများနှင့်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလျော့နည်းစေရန်သို့မဟုတ်ရှောင်ရှားရန်သင်လုပ်နိုင်သည်များကိုလေ့လာပါ။
Albuterol ကနေဒါနိုင်ငံရှိ salbutamol ဟုလည်းခေါ်သောဤသည် steroidal မဟုတ်သောတိုတောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်နှစ် ဦးagonist (SABA) ဆေးသည်နို့တိုက်ခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်ပန်းနာရင်ကြပ်ခြင်း၊ နာတာရှည်ပိတ်အဆုတ်ရောဂါ ။ ၎င်းသည်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ပိတ်ဆို့စေသည့်လေကြောင်းရောဂါရှိသူများအတွင်း bronchospasm ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ရာတွင်အသက်ရှူကျပ်ခြင်းနှင့်အခြားအသက်ရှူပြproblemsနာများဖြစ်ပွားခြင်းတို့ကိုကူညီသည်။ ၎င်းသည် bronchodilators ဟုခေါ်သောဆေးဝါးအမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးလေကြောင်းလမ်းကြောင်းရှိကြွက်သားများကိုလျှော့ချပေးခြင်းဖြင့်လေကြောင်းလမ်းကြောင်းများဖွင့်နိုင်သည်။
နာမည် ပုံစံ အသက်ကန့်သတ်ချက်
Albuterol HFA ရှူရှိုက်မိပါ Aerosol 4+ နှစ်အရွယ်
HFA ကိုစစ်ဆေးပါ ရှူရှိုက်မိပါ Aerosol 4+ နှစ်အရွယ်
Hvent Proventil ရှူရှိုက်မိပါ Aerosol 4+ နှစ်အရွယ်
Ventolin HFA ရှူရှိုက်မိပါ Aerosol 4+ နှစ်အရွယ်
Respiclick proair ဒါမှမဟုတ် Digihaler ပါးစပ်ရှူရှိုက်မိခြင်းအတွက်အမှုန့် အသက် ၁၂ နှစ်အထက်
Albuterol ရည်သို့မဟုတ်တက်ဘလက် 2+ နှစ်အရွယ်
Albuterol Nebulizer ဖြေရှင်းချက် မဟုတ်ဘူး
Albuterol ER တိုးချဲ့ဖြန့်ချိတက်ဘလက် 6+ နှစ်ရှိပြီ
သက်ဆိုင်သော: FDA ကပထမဆုံး ProAir HFA ယေဘူယျအားဖြင့်အတည်ပြုသည်
များစွာသောလူတို့သည် albuterol ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုမခံစားရပါ။ Albuterol ကိုအသုံးပြုသောလူများ၏ ၁၀% မှ ၂၀% သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကိုခံစားကြရသည် ဒေါက်ဂလပ် P. ဂျက်ဖရီ , MD, အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်ရှိမိသားစုဆရာဝန်နှင့် eMediHealth အတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံပေး။ အသုံးအများဆုံးဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများ, အရသိရသည် အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA) တွင်ပါဝင်သည် -
ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုနေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်သောသူများဟုသတ်မှတ်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလေးနာရီမှခြောက်နာရီကြာနိုင်သည်။ သူတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်ဆေးစသောက်ပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်အပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဖြေရှင်းတတ်ကြသည်။ သို့သော်ပြင်းထန်သောသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကြုံတွေ့ရပါကသင့်ဆရာဝန်ကိုဆက်သွယ်သင့်သည်။
သင်၏ဆေးကုသမှုခံယူသူအားဆက်သောက်သင့်သလားသို့မဟုတ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများခံစားရလျှင်၎င်းကိုချက်ချင်းအသုံးပြုခြင်းမပြုသင့်သည်ကိုသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူနှင့်ဆွေးနွေးရန်ကောင်းသည်။ သင်၏ဆရာ ၀ န်ကသင်၏ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကို FDA ရှိဆိုးရွားသောအဖြစ်အပျက်အစီအစဉ်သို့ပေးလိမ့်မည်။ သင်တို့သည်လည်းပြီးအောင်နိုင်ပါတယ် သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအစီရင်ခံရန်အွန်လိုင်းပုံစံ ။
မျက်နှာ၊ လည်ချောင်း၊ လျှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ မျက်လုံး၊ လက်၊ ခြေထောက်၊
နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှာဝိရောဓိဖြစ်သော bronchospasm ဖြစ်သည် အတွက်ထုတ်ဝေအစီရင်ခံစာ ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာများ၏အမေရိကန်ဂျာနယ် ။ အဆိုပါအခြေအနေလေကြောင်း၏ချောမွေ့ကြွက်သားနံရံများ၏မမျှော်လင့်ဘဲကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊ အားစိုက်ထုတ်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းနှင့်အဆုတ်လည်ပတ်မှုကိုခေတ္တလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ အစီရင်ခံစာရေးသားသူများကဝိရောဓိဖြစ်သော bronchoconstriction သည် albuterol အပါအဝင် beta2-agonist ရှူရှိုက်မိသူများ၏သတင်းပို့မှုနည်းသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဤသုတေသနအရဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသည်ဤကုသမှုကိုသုံးသောလူများ၏ ၈% အထိသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဆေးဝါးကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်ကူညီနိုင်သည်။
The FDA ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်လေ့ကျင့်ခန်း - သွေးဆောင် bronchospasm နှင့်အတူသူတို့အဘို့အလေးနှင့်အထက်အသက်ကလူများအတွက်အတည်ပြု albuterol ရှူရှိုက်မိပါ။
Albuterol သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်ဆေးညွှန်းမဆိုမသောက်မီသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ဆရာဝန်အားပြောသင့်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်နှလုံးရောဂါရှိပါကဤဆေးကိုသတိဖြင့်အသုံးပြုသင့်သည် ဆေးညွှန်းသတင်းအချက်အလက် ပါဝင်သည်
The အမေရိကန်နှလုံးအဖွဲ့အစည်း albuterol သည်နှလုံးရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည့်သို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည့်ဆေးများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
FDA ၏အဆိုအရရှားပါးသော်လည်းရှူရှိုက်မိခြင်းဖြင့်ပန်းနာရင်ကြပ်ဆေးများအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့် ဆက်စပ်၍ သေဆုံးမှုသတင်းများရှိခဲ့သည်။ ဤသေဆုံးမှုများ၏အကြောင်းရင်းကိုမသိရှိရသေးပါ။ သို့သော်သုတေသီများကနှလုံးရောဂါနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့အောက်စီဂျင်ရရှိမှုနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့်သံသယရှိနေသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင်သို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်စီစဉ်နေပါကသင်၏ဆရာဝန်ကိုပြောသင့်သည်။ အရ ထုတ်လုပ်သူထံမှသတင်းအချက်အလက် , ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက် albuterol ၏တိုက်ရိုက်လေ့လာမှုမရှိပေမယ့်သန္ဓေသားဖို့အန္တရာယ်နိမ့်ပုံရသည်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကြောင့်အောက်စီဂျင်မရှိခြင်းသည်သန္ဓေသားကို ပို၍ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသောအမျိုးသမီးများ၏ ၄% မှ ၁၂% ကြားပန်းနာရင်ကြပ်ရှိသည်။ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာများ (CDC) ။
ထုတ်ဝေတစ် ဦး ကလေ့လာမှု ကလေးအထူးကု ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဆေးဝါးများသုံးပြီးမွေးရာပါမသန်စွမ်းမှုအတွက်အန္တရာယ်တိုးမြှင့်မပြုခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Albuterol သည်လေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများအသုံးပြုသောအသုံးအများဆုံးဆေးဖြစ်သည်။ သို့သော်အစာပြွန်၊ စအိုနှင့်ဝမ်းဗိုက်အ ၀ န်း၏မွေးရာပါမသန်မစွမ်းမှုများအတွက်ပိုမိုအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
သင်နို့တိုက်နေစဉ်ကလေးငယ်၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသက်ရောက်မှုများကိုလည်းမသိရသေးပါ။ Bronchodilator ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏နို့ရည်ပမာဏကိုပြcauseနာဖြစ်စေနိုင်ခြင်းမရှိဟုဆိုသည် မိခင် သို့သော်သင့်ဆရာ ၀ န်နှင့်စကားပြောသင့်ပြီးသင်ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင်၊ ကိုယ် ၀ န်ဆောင်ရန်စီစဉ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်နို့တိုက်လျှင်အန္တရာယ်နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသေချာစွာဂရုပြုပါ။
Albuterol interaction က
Albuterol သည်အခြားဆေးများနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုနိုင်သည်။ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်သင်သောက်နေသည့်ဆေးဝါးများပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
ဆေးညွှန်းပါသောဆေးများ၊ ဆေးဆိုင်များ၊ ဖြည့်စွက်မှုများနှင့်ဗီတာမင်များအပါအ ၀ င်အခြားမည်သည့်ဆေးများကိုမသောက်ပါကသင်၏ဆရာဝန်အားသင်ပြောပြသင့်သည်။ ဒေါက်တာဂျက်ဖရီ (Dr. Jeffrey) ၏ပြောကြားချက်အရအချို့သောဆေးများသည် albuterol နှင့်ထိတွေ့မှုရှိကြောင်း၊ albuterol နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောမူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်ဆေးညွန်းစာများတွင် -
albuterol နှင့်အတူအသုံးပြုသောအခါစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးထိုးချိန်ညှိလိုအပ်သောအခြားဆေးဝါးများစွာရှိသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများစာရင်းသည်ရှည်လျားလွန်းပြီး၊ albuterol နှင့်အဆက်အသွယ်ပြုနိုင်သည့်ဆေးပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့သူနှင့်တိုင်ပင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုဒေါက်တာဂျက်ဖရီကရှင်းပြသည်။
Albuterol နှင့်ထိတွေ့နိုင်သည့်ဆေးဝါးအချို့ (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆေးများကဲ့သို့အလေးအနက်မဟုတ်သော်လည်း) တွင် -
Epipen, Primatene မြူခိုး (epinephrine)
Xopenex (metaproterenol နှင့် levalbuterol )
Eldepryl, Emsam (ဆဲလီဂလင်း)
ဆေးမသောက်ဘဲထုတ်သောဆေးများအပါအဝင်အအေးမိဆေးများကိုလည်းရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ သို့သော်၊ albuterol နှင့်ချောင်းဆိုးဆေးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ကိုမသိရှိရသေးပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ဤဆေးဝါးများကိုသောက်နေလျှင်၊ သင့်ဆရာဝန်သည်သင်၏ဆေးပမာဏကိုချိန်ညှိရန်လိုအပ်သည်၊
albuterol ၏အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုသည်တစ် ဦး အရသိရသည် အတွက်ထုတ်ဝေအစီရင်ခံစာ ဓာတ်မတည့နှင့်လက်တွေ့ရောဂါပြီးပညာဂျာနယ် ။ ဤဆေးသည်သင်ပြင်းထန်သောပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါလက္ခဏာများရှိသည့်အခါရံဖန်ရံခါအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။ သို့သော်လူပေါင်းလေးပုံတစ်ပုံခန့်သည် Albuterol ကိုနေ့စဉ်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည့်အစားပန်းနာရင်ကြပ်ထိန်းချုပ်သည့်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။ ဆရာဝန်များကရှူရှိုက်မိသောသေတ္တာတစ်လုံးသည်တစ်နှစ်ခန့်ကြာမြင့်သင့်သည်။ သင်သည်သင်၏ရှူရှိုက်မိသောဓာတ်ငွေ့ကိုမကြာခဏအသုံးပြုနေပါကသို့မဟုတ်လအနည်းငယ်သာကြာလျှင်၊ သင်၏ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသည်ကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းနှင့်နေ့စဉ်ဆေးဝါးအကြောင်းသင်၏ဆရာ ၀ န်နှင့်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
Albuterol အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပြီးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များဖြစ်နိုင်သည်။ မင်းမှာပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါလက္ခဏာတွေပိုများတာဒါမှမဟုတ်ရောဂါတွေပိုဆိုးလာတာကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မယ်။ ရှူရှိုက်မိသူများကိုရှူရှိုက်မိသူများသည် Albuterol ကိုရံဖန်ရံခါသာသောက်သုံးသူများထက်ချောင်းဆိုးခြင်း၊ သူတို့ကသူတို့ဘဝ၏အရည်အသွေးနိမ့်နှင့်စိတ်ကျရောဂါနှုန်းပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်ကိုလည်းဖော်ပြခဲ့သည်။
အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုသည် albuterol အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုအစီရင်ခံစာအရသိရသည်။ အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း၏လက္ခဏာများတွင် -
သင်သို့မဟုတ်သင်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်အလွန်အကျွံသောက်နေပြီဟုသင်ယုံကြည်လျှင်အဆိပ်ထိန်းချုပ်မှုစင်တာကို 1-800-222-1222 သို့ဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်ချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူသင့်သည်။
1. ညွှန်ကြားသည်အတိုင်းယူပါ။ Albuterol ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုရှောင်ရှားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ၎င်းကိုညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ဆရာဝန်ကဆွေးနွေးသင့်သည် သင့်လျော်သောသောက်သုံးသော နှင့်ဆေးကိုသင်မည်မျှသောက်သင့်သည်။ တိုင်းတာသောဆေးထိုးသည့်ရှူရှိုက်မိသောလူကြီးများအတွက်အကြံပြုထားသောဆေးသည်လေးနာရီမှခြောက်နာရီတိုင်းတွင်တစ်ကြိမ်မှနှစ်ချောင်းဖြစ်သည်။ တက်ဘလက်များနှင့်ရည်များအတွက်အကြံပြုထားသောဆေးသည် ၆ နာရီမှရှစ်နာရီလျှင် ၂-၄ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ တိုးချဲ့ထားသောပုံသေနည်းသည် ၁၂ နာရီကြာပြီးတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်သောက်နိုင်သည်။
2. နဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်သုံးပါ။ Medical Associates Clinic ကဆေးကိုရှူသွင်းရာမှာနှေးကွေးစေနိုင်တဲ့နဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်ဖြန့်ထားသော spacer ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။ နဂိုကတည်းကဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏အဆုတ်ထဲသို့ဝင်သောဆေးပမာဏကိုတိုးပွားစေပြီး၊ သင်၏ပါးစပ်အတွင်းရှိဆေးဝါးအရသာကိုလျော့နည်းသွားစေနိုင်သကဲ့သို့လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ကလေးများအတွက်အထူးအဆင်ပြေသည့်နောက်နည်းလမ်းမှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကုသမှုကိုခံယူခြင်း (သို့မဟုတ်စီမံခြင်း) ဖြင့်ဖြစ်သည် nebulizer စက် ။
3. ကွဲပြားခြားနားသောနေ့စဉ်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဆေးဝါးများနှင့်အတူဖြည့်စွက်။ Albuterol သည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါလက္ခဏာများအတွက်အမြန်ကယ်နှုတ်သည့်ဆေးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်စူးရှသောရောဂါလက္ခဏာများကြုံတွေ့ရပြီးမှသာအကြံပြုထားသောလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းသာသောက်သင့်သည်။ သင့်တွင်ရောဂါလက္ခဏာများရှိနေသေးကြောင်းတွေ့ရှိပါကသို့မဟုတ်အကြံပြုထားသည့်ဆေးများသည်ရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေရန်မထင်ထားပါကသင့်ဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုသင့်သည်။ နေ့စဉ်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသမှုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်၊
4. ဆေးပြောင်းပါ။ ရက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်အပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သင်သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများခံစားနေရပါကသင့်ဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပြင်းထန်ပါကလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အဆင့်များရှိပါသည်။ သင်ဆေးကိုရပ်ရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်၊ သို့သော်သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်တိုင်ပင်မှသာသင်လုပ်သင့်သည်။ တူညီသောရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုသောအခြားဆေးဝါးတစ်ခုသို့ပြောင်းခြင်းကကူညီနိုင်သည်။ ဒေါက်တာဂျက်ဖရီ၏အဆိုအရဆေးရည်သို့မဟုတ်အရည်အစားရှူရှိုက်မိပါကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာနည်းပါးသည်။
၅။ လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်ပါ။ သင်၏ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါလက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည် albuterol လိုအပ်မှုကိုလျော့နည်းစေသဖြင့်သင်၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလျော့နည်းစေသည်။ သင်၏ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကိုထိန်းချုပ်ရန်နည်းလမ်းအချို့မှာ -
ဝတ်မှုန်၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ လေအေး၊ ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်း၊ ရေမွှေးသို့မဟုတ်ဆံပင်မှုန်ရေမွှေးကဲ့သို့သောအနံ့နှင့်စီးကရက်မီးခိုးစသည့်အစပျိုးအစရှိသောအရာများကိုနားလည်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားခြင်း။
အိမ်တွင် dehumidifier သုံးခြင်း
albuterol များအတွက်ကူပွန်အပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည် ချစ်သူ သို့မဟုတ်ရရှိနိုင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်း Android နှင့် ios ။ သင်လုပ်နိုင်သည် အများဆုံးအဓိကဆေးဆိုင်များမှာကူပွန်ကိုသုံးပါ အဖြစ်အချို့သောဒေသဆိုင်ရာသူမြားကိုအဖြစ်။ သင်သည်သင်၏ zip ကုဒ်နံပါတ်ကိုရိုက်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင့်ဒေသရှိရှိရနိုင်သောဆေးဆိုင်များကိုတွေ့နိုင်သည်။
စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါ vs. နယ်ခြားမျဉ်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ: ခြားနားချက်ကဘာလဲ နှစ်ခုလုံးရနိုင်မလား
Tramadol vs. Hydrocodone: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်မည်သည့်အရာကပိုကောင်းသည်
erectile dysfunction အတွက်သဘာဝကုထုံးရှိပါသလား